(Dhagyaso) C/qaasim oo sheegay Fawsiyo inaysan waxba kusoo kordhin-karin wadaxaajoodkii Soomaaliya iyo Somaliland. – Radio Daljir
(Dhagyaso) C/qaasim oo sheegay Fawsiyo inaysan waxba kusoo kordhin-karin wadaxaajoodkii Soomaaliya iyo Somaliland.
Nofeembar 6, 2012 7:11 b 0
Qaahira, Nov, 06 – Madaxwayne C/qaasim Salaad Xassan ayaa isagoo ku sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar waxaa uu waraysi gaar ah oo uu siiyay Radio Daljir uu ku sheegay in dadka Jubbooyinka looga baahanyahay inay deegaannadooda u doortaan maamul matala, dawladduna arrintaasi ay gacan ka siiso. Waxaana uu ka digay faragalinta Jubbooyinka ay ku hayaan dawladaha jaarka la’ah Soomaaliya.
C/qaasim ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo golaha cusub ee wasaaradda Soomaaliya, waxaase uu guul-wayn ku tilmaamay isbadelka taariikhiga ah ee Soomaaliya ka dhacay iyo doorashadii Moqdisho.
Madaxwayne C/qaasim oo waraysigiisa uga hadlay arrinta nidaamka federaaliiska ayaa sheegay muhiim inuusan ahayn magaca Federaaliisimku, balse loo baahanyahay dadku inay deegaannadooda nabadeeyaan, dawladdana la shaqeeyaan.
?Waxba kuma saa?idin karto wadahadalkii Soomaaliya iyo Waqooyi-galbeed wasiirka arrimaha dibadda ahna R/wasaare kuxiggeenka Soomaaliya Fawsiyo Xaaji Aadan, laakiin waa gabar Soomaaliyeed oo tacliin leh, waajib ayaana dalkeeda ka saran? madaxwayne C/qaasim ayaa sidaasi yiri.
Halkaan ka dhagayso waraysigii madaxwayne C/qaasim Salaad Xassan ay Radio Daljir la yeelatay.
Caawa iyo Daljir_Isniin, Nov 5-2012, Maxamed Cabdilaahi Cali (Kooshin)_Daljir Garoowe.